William Scahba လိုက်ပါဆောင်ရွက်မည့်အတွက် မတ်ခ်ဖန်းမား စိတ်ပူ – H2Oupdatenews
William Scahba လိုက်ပါဆောင်ရွက်မည့်အတွက် မတ်ခ်ဖန်းမား စိတ်ပူ
ICJ သို့ တက်ရောက်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နယ်သာလန်အစိုးရက လေဆိပ်၌ ဆီးဖမ်းတော့မယောင် ရေးသားနေသည်များ တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းမှာ လုံးဝမှားယွင်းသည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ICC အတွက် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ဖမ်းဆီးလွှဲပြောင်းသော တရားခံမဟုတ်ပါ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ ICJ ၌ အငြင်းပွားသည်ကို နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအား ကိုယ်စားပြုလျှက် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် လာရောက်သူသာဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဖွဲ့အား နယ်သာလန်အစိုးရက သံတမန်အဆင့် ဗီဇာထုတ်ပေး ပါလိမ့်မည်။ နယ်သာလန်အစိုးရ၏ တရားဝင်ဖတ်ကြားသော ခရီးစဉ် မဟုတ်ခြင်းကြောင့် ကောဇောနီခင်းကာ အမြောက်ပစ်ဖောက်ကြိုဆိုရန်မလိုသော်လည်း နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အကြီးအကဲဖြစ်ပါသဖြင့် အဆင့်အတန်းနှင့် အညီ လုံခြုံရေး သွားလာရေး စီစဉ်ပေးရပါလိမ့်မည်။
မြန်မာဖက်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေနှင့် Genocide အထူးကျွမ်းကျင်သူ William Scahba လိုက်ပါဆောင်ရွက်မည့်အကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်လာရာတွင် အထူးဂယက်ရိုက်သည်မှာ ကျွန်တော်တို့ဘက်မဟုတ်ပဲ တရားပြိုင်ဘက်က ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မျှော်လင့်ထားသည်မှာ ICJ ကိစ္စကို NLD အစိုးရက ခပ်ကင်းကင်းနေပြီး ရှေ့နေချုပ်လောက်နှင့် လွှတ်ပေးမည်ဟု ထင်နေပုံရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို အစိုးရအဖွဲ့ဦးစီးဖြစ်သူက ခေါင်းဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု တွက်ဆထားပုံရသည်။
ဤတွင် ကျွန်တော်များနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတို့ကို ပုတ်ခတ်စော်ကားယုံမက William Scahba ကိုပါ စားမရ- သုံးမရဖြစ်အောင် ထိုးနှက်နေကြပါသည်။
ပါမောက္ခ William Scahba လိုက်ပါဆောင်ရွက်မည်ဆို၍ မြန်မာတော့ ICJ အမှု့ရှုံးပါပြီဟု စိတ်ပျက်လ က်ပျက်ဖြစ်သွားသည့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုသူများကို ကြည့်လိုက်သောအခါ အံ့သြစရာပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်အား ဘယ်တုန်းကမှ အကောင်းမပြောခဲ့သည့်အပြင်၊ ယခု ICJ ရောက်ရာတွင် ပါဝင်သော လူမျိုး တစ်မျိုးကို လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များက စတင်ဖန်တီး မွေးဖွားပေးခဲ့ရာတွင် Europe- Burma Office Office နှင့်အတူ ပါဝင်သော ( သိူ့မဟုတ် ) ဝေနှင်းပွင့်သုန်ကို ဒုတိယ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖြစ် ပွဲထုတ်ပေးခဲ့ ဖူးသော Burma Campaign ( UK ) မှ အမှု့ဆောင်ညွှန် ကြား ရေးမှူး Mark Farmaner မတ်ခ်ဖန်းမား ကြီး ဖြစ်နေလေသည်။
Great to be at the teachers trade union NASUWT conference in Belfast this weekend. Lots of support for our campaign, including access to education for Rohingya children.
Posted by Burma Campaign UK on Saturday, 20 April 2019
Previous Previous post: အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတအိမ်တော်အနီး ပေါက်ကွဲမှု့ဖြစ်။ စစ်သားနှစ်ဦး ဒါဏ်ရာရရှိ။
Next Next post: ) မြင်းစီးလျှက် အထီးမှန်း- အမမှန်း မသိသူများ